Kufunga zvigadzirwa zvitsva, masevhisi kana Zvimiro | Martech Zone
Kufunga zvigadzirwa zvitsva, maSevhisi kana Zvimiro
Mugovera, July 12, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino ndakagamuchira Yakagadzirirwa mukati kubva Pragmatic Kushambadzira.
Ndiri nezve chetatu cheiyo nzira kuburikidza nebhuku izvozvi uye ndichiifarira. Kune akawanda maoko-pane mienzaniso yekuti mabhizimusi hubris akavatungamira sei pasi penzira yezvisarudzo zvisina kunaka nekuti ivo vaive vasina 'Tuned In' kune avo tarisiro. Nekusaziva izvo tarisiro yavo yaida, makambani anga achivhura zvigadzirwa, masevhisi kana maficha aive anonhuwa.
Nekuuya kwemagariro enhau uye newebhu, ndinofunga pane chiyero paunenge uchisarudza zvigadzirwa zvitsva, masevhisi, kana maficha, zvakadaro, izvo zvinopfuura kupfuura tarisiro. Iye zvino kuti mutengi iri yakasimba svikiro rekushambadzira, iwe unofanirwa kuvateererawo zvakare. Bhuku rakafuridzira iyi posvo.
Heino nzira yandinotora yekusarudza zvakakosha zvezvigadzirwa zvitsva, masevhisi kana maficha kwandinoshanda:
Chii chinonamira? Mune mamwe mazwi, chii chandiri kuvandudza icho chiri kuzovandudza kuchengetedzwa kwevatengi? Kana iwe uri SaaS mutengesi, semuenzaniso, une API? Ma API anonakidza nekuti anoda kodhi shoma, kutsigirwa kushoma, uye ivo vanoda kudyarwa kwemukati nemutengi wako kuti asanganise nechigadzirwa chako.
Chii Chinonzwisisika? Zvimwe zvigadzirwa, masevhisi, kana maficha akakosha huremu hwavo nekuda kwekukanganisa kwavachave nako muindastiri. Mumwe muenzaniso mukuru weiyi nharembozha yekuodha maresitorendi. Nepo makuru mahotera epitsa achiri kungowana gumi muzana yezvavanotengesa online, ikozvino vaisa mari munhare.
Iyo yekudyara ingangodaro iri yekurasikirwa nebhizinesi nekuti ruzivo rwevashandisi kuburikidza nefoni inoyamwa. Nekudaro, ivo vaifanira kukwikwidza kumusika nemhinduro kuti vagowana hype. Iyo nyowani hype mawadhi.
Sidenote: Ini ndinotenda mafoni ekuraira uye majeti achave nezuva ravo - asi ichave rakagadziriswazve nekufamba kwenguva sezvo tekinoroji ichivandudza. Aya mabhizinesi akaisa mari mune izvi izvozvi nekuda kweiyo buzz uye isina kunangana bhizinesi - kwete yakananga bhizinesi mhedzisiro.
Chii PTO-kukodzera? Vatengi vako vari kuronga pamusoro uye pasina. Vashandi vanowanzoomerera kumaindasitiri asi vanoenda kumakambani akasiyana. Izvi zvinoreva kuti kushambadzira kweIzwi reMuromo kwakakosha uye bhizinesi rako rinofanira kuritarisa semukana. Kana iwe ukagadzira chigadzirwa, sevhisi kana chimiro icho vatengi vako vanoenda mabhanana pamusoro, iwe zvirinani utende kuti vari kutaurira vamwe vanhu muindastiri nezvazvo!
Chii Chinotengeswa? Uku ndiko kunyanya kufunga kuseri kweizvo zvandakaverenga kusvika ikozvino Yakagadzirirwa mukati. Ichi ndicho chinhu chikuru mukukudza bhizinesi rako - chako chigadzirwa, sevhisi kana chimiro chinofanirwa kuzadza bhizinesi vanoda. Mune mamwe mazwi, nekutenga chigadzirwa chako - iyo bhizinesi kubhizinesi rangu inodarika mutengo. Kana pasina chikonzero ipapo, pamwe hausi kuzobudirira. Kutengesa chando kune Eskimos ingori ngano.
Chero cheizvi zvinhu chingasimudzira chimwe. Dzimwe nguva, isu takagadzira zvinhu zvitsva zvinongodiwa kudiwa netarisiro huru kwazvo. Kwaive kubheja, asi isu takaziva kuti kudyara kwacho kwaizobhadhara kunyangwe tikasabata iye mutengi chaiye. Ini ndinotenda kuti mugwagwa mukuru unofanirwa kuve neese mana eaya matanho mariri.
Tags: 6 matanho ekushambadzira inboundzvemukati optimizationkasitoma rutsigirodhizaini infographicsGeographic optimizationgeographic seomaitiro ekushambadzira akapindakutungamirira kutarisiraoptimization yemunoPragmatic Kushambadzira
Tarisa uone iyi Call to Action!
WordPress Ichishanduka kuita CMS Powerhouse